27 Ebe e kpebiri na anyị ga-eso ụgbọ mmiri gawa Ịtali,+ ha nyefere ma Pọl ma ụfọdụ ndị mkpọrọ ọzọ n’aka otu onyeisi ndị agha aha ya bụ Juliọs, onye so n’ìgwè ndị agha Ọgọstọs. 2 Anyị banyere n’otu ụgbọ mmiri nke si Adramitiọm, nke chọrọ ịgawa n’ebe ndị dị n’ụsọ osimiri nke ógbè Eshia, anyị wee soro ụgbọ mmiri ahụ gawa, Arịstakọs+ onye Masedonia nke si Tesalonaịka sokwa anyị. 3 N’echi ya, anyị kwụsịrị na Saịdọn, Juliọs jikwa obiọma+ meso Pọl omume. O kwekwara ka ọ gakwuru ndị enyi ya ka ha wee lekọta ya.+ 4 Anyị si n’ebe ahụ kwọrọ ụgbọ banye n’oké osimiri, anyị wee gaa Saịprọs, bụ́ ebe anyị nwetara nchebe, n’ihi na ifufe nọ na-efegide anyị; 5 anyị sikwa n’oké osimiri dị n’akụkụ Silishia na Pamfilia gabiga wee ruo n’ọdụ ụgbọ mmiri dị na Maịra n’ime Lishia. 6 Ma n’ebe ahụ, onyeisi ndị agha ahụ hụrụ otu ụgbọ mmiri si Alegzandria+ bụ́ nke na-aga Ịtali, o wee mee ka anyị banye na ya. 7 Ma, mgbe anyị kwọrọ ụgbọ nwayọọ nwayọọ ruo ọtụtụ ụbọchị ma jisie ike rute Kinaịdọs, n’ihi na ifufe ekweghị ka anyị nọgide na-aga, anyị kwọọrọ ụgbọ banye Krit, nke dị na Salmoni, bụ́ ebe anyị nwetara nchebe. 8 Ka anyị jisikwara ike kwọrọ ụgbọ na-aga, anyị bịaruru n’otu ebe a na-akpọ Ọdụ Ụgbọ Mmiri Ọma, bụ́ ebe dị obodo Lesia nso. 9 Ebe ọ bụ na oge agafetụla, ọ dịkwa ize ndụ ime njem na mmiri ugbu a n’ihi na ọbụna ibu ọnụ nke ụbọchị mkpuchi mmehie+ agafewo, Pọl tụrụ aro, 10 sị ha: “Ana m ahụ na ọtụtụ ihe ga-efu, laakwa n’iyi na njem a, ọ bụghị naanị ibu na ụgbọ mmiri ga-ala n’iyi, kamakwa mkpụrụ obi anyị.”+ 11 Otú ọ dị, onyeisi ndị agha ahụ ṅara ntị n’ihe onye ọkwọ ụgbọ na onye nwe ụgbọ mmiri ahụ kwuru kama ịṅa ntị n’ihe Pọl kwuru. 12 Ma ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ mmiri adịghị mma ịnọ n’oge oyi, ihe ka n’ọnụ ọgụgụ tụrụ aro ka a kwọpụ ụgbọ n’ebe ahụ, iji hụ ma ọ̀ dị ụzọ ọ bụla ha nwere ike isi garuo Finiks ma nọrọ n’ebe ahụ n’oge oyi, bụ́ ọdụ ụgbọ mmiri Krit nke e si abanye n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ na n’ebe ndịda ọwụwa anyanwụ. 13 Mgbe ifufe nke si n’ebe ndịda fekwara nwayọọ nwayọọ, ha chere na ha emezuwo nnọọ ihe ha bu n’obi, ha dọlitekwara arịlịka ma malite ịkwọrọ ụgbọ na-aga n’akụkụ ikpere mmiri nke dị n’akụkụ Krit. 14 Ma, n’oge na-adịghị anya, oké ifufe+ a na-akpọ Yuroakwilo malitere ife n’ebe ahụ. 15 Ebe ọ nọ na-ebusi ụgbọ mmiri ahụ ike, nke mere na o nweghị ike iguzogide ifufe ahụ, anyị hapụrụ ya, o wee buru anyị na-aga. 16 Ma anyị gbabara n’otu obere agwaetiti a na-akpọ Kọda, bụ́ ebe anyị nwetara nchebe, ma ọ ka siiri anyị ike ijide obere ụgbọ epeepe+ ahụ dị n’azụ. 17 Ma mgbe ha bubatasịrị ya n’ime ụgbọ ahụ, ha ji ụdọ kesie okpuru ụgbọ mmiri ahụ ike; ebe ha na-atụ egwu na ụgbọ mmiri ha ga-akpụ n’ala na Sietis, ha tọturu ihe e ji eduzi ụgbọ mmiri, ifufe wee si otú a buru ha na-aga. 18 Ma n’echi ya, ha malitere ịtụfusị ihe dị n’ụgbọ mmiri ahụ,+ n’ihi na oké ifufe ahụ nọ na-aṅagharịsi anyị ike. 19 N’ụbọchị nke atọ, ha ji aka ha tụfusịa ihe e ji arụ ọrụ n’ụgbọ mmiri ahụ. 20 Mgbe anyanwụ ma ọ bụ kpakpando na-apụtaghị ruo ọtụtụ ụbọchị, oké ifufe mmiri+ nọkwa na-efekwasị anyị, anyị enwekwaghị olileanya ọ bụla na a ga-azọpụta anyị. 21 Mgbe ha nọchara ogologo oge n’erighị nri, Pọl guzoro ọtọ n’etiti ha+ wee sị: “Unu gaara anara ndụmọdụ m ma ghara ịkwọrọ ụgbọ banye n’oké osimiri na Krit, ma nwee mfu na ịla n’iyi a.+ 22 Otú o sina dị, ana m atụrụ unu aro ugbu a ka unu nwee obi ike, n’ihi na ọ dịghị mkpụrụ obi ọ bụla n’ime unu ga-ala n’iyi, ọ bụ naanị ụgbọ a ga-ala n’iyi. 23 N’ihi na n’abalị a, otu mmụọ ozi+ nke Chineke, bụ́ onye m bụ nke ya na onye m na-ejere ozi dị nsọ, guzoro m nso,+ 24 sị m, ‘Atụla egwu, Pọl. Ị ghaghị iguzo n’ihu Siza,+ lee! Chineke ewerewo amara zọpụta ndị niile gị na ha nọ n’ụgbọ mmiri a n’ihi gị.’ 25 Ya mere, nweenụ obi ike; n’ihi na ekweere m ihe Chineke kwuru+ na ọ ga-adị kpọmkwem dị ka a gwara m. 26 Otú ọ dị, a ga-aghasa anyị n’ikpere mmiri n’otu agwaetiti.”+ 27 Ma mgbe chi abalị nke iri na anọ jiri, anyị ana-aṅagharịkwa n’elu oké osimiri Edria, n’etiti abalị, ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ malitere iche na ha na-eru nso n’ebe bụ́ ala. 28 Ha wee tụọ ịdị omimi ya n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ma hụ na ọ dị fatọm iri abụọ; ha wee gakwuo n’ihu nke nta ma tụọ ya ọzọ wee hụ na ọ dị fatọm iri na ise. 29 Ebe ha na-atụ egwu na e nwere ike ịghasa anyị n’otu ebe n’elu nkume, ha si n’azụ ụgbọ mmiri ahụ tụpụ arịlịka anọ, o wee malite ịdị ha ka chi bọọ. 30 Ma mgbe ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ chọwara isi n’ụgbọ ahụ gbapụ ma wetuo obere ụgbọ epeepe n’oké osimiri, na-eme ka à ga-asị na ha bu n’uche isi n’ihu ụgbọ ahụ wedasịa arịlịka, 31 Pọl gwara onyeisi ndị agha na ndị agha ahụ, sị: “Ọ bụrụ na ndị ikom a anọgideghị n’ụgbọ a, a pụghị ịzọpụta unu.”+ 32 Ndị agha ahụ gbubiri ụdọ nke obere ụgbọ epeepe+ ahụ ma hapụ ya ka ọ dapụ. 33 Ma ka chi na-achọ ịbọ, Pọl malitere ịgba ha niile ume ka ha ritụ ihe oriri, sị: “Taa bụ ụbọchị nke iri na anọ unu nọ na-eche nche, unu nọkwa n’erighị nri, ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe unu onwe unu riri. 34 Ya mere, ana m agba unu ume ka unu ritụ ihe oriri, n’ihi na nke a bụ maka nzọpụta unu; n’ihi na ọ dịghị otu ntutu+ isi nke otu onye n’ime unu ga-ala n’iyi.” 35 Mgbe o kwusịrị nke a, ya onwe ya weere otu ogbe achịcha, kelee Chineke+ n’ihu ha niile ma nyawaa ya wee malite iri ya. 36 Ya mere, obi tọrọ ha niile ụtọ, ha onwe ha malitekwara iritụ ihe. 37 Anyị niile, bụ́ mkpụrụ obi nọ n’ụgbọ mmiri ahụ, dị narị abụọ na iri asaa na isii. 38 Mgbe ha rijuru nri afọ, ha mewere ka ịdị arọ nke ụgbọ mmiri ahụ belata+ site n’isi n’ime ya na-atụba ọka wit n’ime oké osimiri. 39 N’ikpeazụ, mgbe chi bọrọ, ha enweghị ike ịmata ebe ala ahụ bụ ma ha nọ na-ahụ otu ọnụ mmiri nke nwere ikpere osimiri, ọ bụkwa n’ebe ahụ ka ha kpebiri ịkwụsị ụgbọ ahụ n’akụkụ osimiri,+ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ha omume. 40 Ya mere, ka ha gbubiri arịlịka ndị ahụ, ha hapụrụ ha ka ha daba n’oké osimiri, ha tọpụkwara ụdọ ụmara ụgbọ ahụ n’otu oge ahụ. Mgbe ha dọlisikwara ákwà na-adị n’ihu ụgbọ mmiri ka ifufe na-ebu ya, ha gawara n’ikpere osimiri ahụ. 41 Mgbe ha kwụsịrị na mberede n’elu otu mkputamkpu ájá mmiri nke oké osimiri ahụ na-asọ n’akụkụ ya abụọ, ha kwọọrọ ụgbọ ahụ banye n’ájá, ihu ụgbọ ahụ wee tọ n’otu ebe, ma azụ ụgbọ ahụ malitere ịkụrisị n’ike.+ 42 Ndị agha ahụ wee kpebisie ike igbu ndị mkpọrọ ahụ, ka onye ọ bụla ghara igwuru mmiri pụọ ma gbalaga. 43 Ma onyeisi ndị agha ahụ chọrọ ịkpọpụta Pọl n’enweghị ihe mere ya, o wee gbochie ha ime ihe ha chọrọ ime. O nyekwara ndị nwere ike igwu mmiri iwu ka ha maba n’oké osimiri ma buru ụzọ gwuru mmiri ruo n’elu ala, 44 gwakwa ndị ọzọ ka ha mee otú ahụ, ka ụfọdụ ndị jide ibé osisi aka, ka ndị ụfọdụ jidekwa ihe ụfọdụ si n’ụgbọ mmiri ahụ aka. Otú a ka e si kpọpụta mmadụ niile n’elu ala n’enweghị ihe mere ha.+